Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စစ်တွေ GTC ကျောင်းကြိုပို့ယာဉ်ကို ဘင်္ဂါလီများ နှောင့်ယှက်သောကြောင့် ကျောင်းမတက်ရဲ
စစ်တွေ GTC ကျောင်းကြိုပို့ယာဉ်ကို ဘင်္ဂါလီများ နှောင့်ယှက်သောကြောင့် ကျောင်းမတက်ရဲ
ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၂ (YPI) – ယမန်နေ့က စစ်တွေအစိုးရနည်းပညာကောလိပ်မှ ကျောင်းကြိုပို့ယာဉ်ကို ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီလူအုပ်စုက ဟန့်တားနှောက်ယှက်ခဲ့သောကြောင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများမှာ ၎င်းလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ကြပြီး ကျောင်းမတက်ရဲဖြစ်နေကြသည်။
ယမန်နေ့က ကျောင်းဝန်းအတွင်း လုံထိန်းရဲ ငါးဦးချထားသည့်ကြားမှ ကျောင်းအနီးတ၀ိုက်တွင် ယင်းကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများမှာ ၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးအတွက် များစွာစိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းကောလိပ်မှဆရာမတစ်ဦးက ပြောသည်။
``ကျွန်မကတော့ အလုပ်ထုတ်ရင်ထုတ်ပစ်လိုက်။ လုံခြုံမှုအပြည့်အ၀ မပေးနိုင်သရွေ့ ကျောင်းတက်(စာသင်)မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့တောင် ကျွန်မ ကျောင်းမတက်ဘူး´´ ဟု မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့သည့် ၎င်းဆရာမက ပြောသည်။
ယနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကျောင်းသို့သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက် စစ်သားအချို့ကို လုံခြုံရေးအတွက် ချပေးထားသော်လည်း ကျောင်းတက်သူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားဦးရေမှာ မရှိသလောက်ဖြစ်သွားကြောင်းလည်း စစ်တွေဒေသခံများက ပြောသည်။
ယမန်နေ့နေ့လည် ၂ နာရီဝန်းကျင်ခန့်က စစ်တွေရှိ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(GTC)မှ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ စီးနင်းလာသော ကျောင်းကြိုပို့ယာဉ်အား ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီလူအုပ်စုက ဟန့်တားနှောင့်ယှက်မှုများပြုလုပ်သောကြောင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ကြောက်လန့်ကာ ဒရောသောပါး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရကြောင်း ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးက YPI သို့ပြောသည်။
``သူတို့(ဘင်္ဂါလီ)တွေက ခဲတွေဘာတွေနဲ့ လှမ်းပစ်တာ… ရှေ့ဆုံးက (သုံးဘီးဆိုင်ကယ်)တက္ကစီမောင်းတဲ့သူထိသွားတာနဲ့ ကျနော်တို့လည်း ကြောက်အား၊ လန့်အားနဲ့ ကျောင်းဘက်ပြန်လှည့်ပြီး ရှောင်တိမ်းလိုက်ရတယ်´´ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
``တချို့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ကားပေါ်ကနေခုန်ဆင်းပြီး ကျောင်းဘက်ကိုပြေးကြတာ၊ ထမင်းချိုင့်တွေ ပြုတ်ကျတဲ့သူပြုတ်ကျ။ တချို့မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ကျွတ်ကျသွားတဲ့ ထမီကိုတောင် ပြန်ကောက်မ၀တ်နိုင်ကြဘူး။ အသက်ဘေးဆိုတော့ ထွက်ပြေးကြရတာ´´ဟု အထက်ပါ GTC ပထမနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်သူက ထပ်ပြောသည်။
ထိုဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားပြီး နာရီဝက်အကြာတွင် စစ်သား ၁၅ ဦးပါဝင်သော စစ်ကားတစ်စီးရောက်လာကာမှ ဒုတ်၊ ဒါး၊ သံချွန်အစရှိသည်များ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဘင်္ဂါလီယောက်ျား၊ မိန်းမ အယောက် ၅၀ ကျော်တို့မှာ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြသည်ဟု ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် ကျောင်းသားများက ပြောသည်။ ထိုသို့ နှောက်ယှက်သော ဘင်္ဂလီများမှာ ကျောင်းသွားလမ်း အနီးအနားရှိ သဇင်ပိုက်ရွာနှင့် ရေချမ်းပြင်ရွာတို့မှ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ကျောင်းသားများက ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။
စစ်တွေမြို့၏ အနောက်ဘက် ၁၂ မိုင်ဝန်းကျင်တွင် တည်ရှိသော အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်ကို မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးအခင်းကြောင့် ပိတ်ထားခဲ့ပြီး ယခုကုန်ခဲ့သည့် တနင်္လာနေ့ (ဇွန် ၁၆ ရက်)ကမှ လုံခြုံရေးစိတ်ချရပြီဟု ယူဆကာ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး ယခုဖြစ်ရပ်မှာ ကျောင်းစဖွင့်ပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အခြေအနေများ ပုံမှန်အနေအထားပြန်ရောက်နေပြီဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသော်လည်း ဒေသခံများမှာ အပြည့်အ၀လုံခြုံပြီဟု မခံစားရသေးဘဲ အခြေအနေ ပြန်လည်ဆိုးရွားလာမည်ကို စိုးထိတ်နေကြသည်။ ည ၆ နာရီကျော်လျင် အပြင်မထွက်ရဟူသည့် `ညမထွက်ရ´ အမိန့်ရှိနေသေးခြင်းကလည်း အခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်သည့် သဘော သက်ရောက်နေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
တစ်ဘက်နိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီများ ခိုးဝင်နိုင်မှုမရှိစေရန် ကြည်းတပ်နှင့် ရေတပ်က နယ်စပ်တစ်လျှောက် လုံခြုံရေးအပြည့်ယူကာ စောင့်ကြပ်နေသည်ဆိုသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ လူ ၈ ဦး လိုက်ပါလာသည့် စက်လှေတစ်စီး တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာရာ ပေါက်တောမြို့နယ်၊ ဆင်တက်မော်ကျွန်းနားရောက်မှ ၎င်းလှေကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ကာ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
စက်လှေပေါ် လိုက်ပါလာသည့် ယင်း ၈ ဦးအနက်၊ တစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိသွားသောကြောင့် စစ်တွေဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျန် ၇ ဦးကို စစ်တွေထောင်သို့ ပို့ကာ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၎င်းတို့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ ခိုးဝင်လာသူများဖြစ်သည်ဟု ၀န်ခံခဲ့ကြကြောင်း ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သည့် YPI ၏ သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောသည်။
ရေတပ်ဘက်မှ ရရှိသည့် သီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်းတစ်ခုအရ စုစုပေါင်း ခိုးဝင်လာသည့် စက်လှေအရေအတွက်မှာ ၁၁ စီးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ကျန် ၁၀ စီးကို ဖမ်းဆီးရမိသည်၊ မရမိသည်ကိုမူ သတင်းမရရှိသေးပေ။
``ဘယ်လိုလုပ် ကျနော်တို့ ဒီမှာ အေးချမ်းနိုင်မှာလဲ…အချိန်မရွေး တစ်ခုခု ထဖြစ်နိုင်တယ်…သတိနဲ့နေနေကြရတယ်´´ ဟု စစ်တွေဒေသခံ အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကပြောသည်။ ။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 02:52
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စစ်တွေ GTC ကျောင်းကြိုပို့ယာဉ်ကို ဘင်္ဂါလီများ နှောင့်ယှက်သောကြောင့် ကျောင်းမတက်ရဲ . All Rights Reserved